>एजेन्सी । दिनमा कति घन्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउनुहुन्छ ? २ घन्टा ? ४ घन्टा ? ६ घन्टा ? वा अझै बढी ? तपाईको लागि महत्वपूर्ण खबर छ ।
फेसबुक, ट्वीटर र इंस्टाग्राम जस्ता सोसल नेटवर्किङका साइटहरु दिनमा २ घण्टा भन्दा बढी प्रयोग गर्ने युवायुवतीहरुलाई उपयोगी हुने गरी एउटा अध्ययनले महत्वपूर्ण तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यो अध्ययन अनुसार सामाजिक नेटवर्कका साइटहरु धेरै समयसम्म प्रयोग गर्ने किशोरमा आत्महत्याको भावना र विचार बढ्दै जाने, मनोवैज्ञानिक समस्या तथा विकार बढ्ने खतरा हुन्छ । यसका साथै उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि खराबी देखिने कुरा बाहिर आएको छ ।
लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने युुवाहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य सहायता चाहिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । एकातिर यो अनुसन्धानले अभिभावकलाई एउटा महत्वपूर्ण संदेश दिएको छ भने अर्कोतिर यस्ता साइटसम्म आफ्नो पहुँच बढाउनका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई एउटा अवसर प्रदान गरेको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा क्यानाडामा रहेको ओटावा पब्लिक हेल्थमा आवद्ध ह्युग्युस सापसा कयिगा र रोजमण्ड लुईसले ७ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने छात्रहरुबारे ओन्टारियो छात्र औषधि उपभोग एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा रहेको तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेका थिए ।
यी छात्रहरु मध्ये २५ प्रतिशतले एकदिनमा २ घण्टाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बानी परेको पाइएको थियो । अनुसन्धानकर्ताले किशोरहरुले सामाजिक सञ्जालमा बिताएको अवधिलाई उनीहरुको मनोवैज्ञानिक परीक्षण र मानसिक स्वास्थ्य सहायताको आवश्यकतासँग तुलना गरेका थिए ।
क्यालिफोर्नियाको स्यानडिएगोमा रहेको इन्टरयाक्टिभ मिडिया इन्स्टिच्युटकी ब्रेडा के.विडरहोल्डले भनिन्, ‘यदि हामी सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने यो कसैका लागि समस्याको कारण र कसैका लागि समाधानको रुपमा देखिएको छ ।’
जब किशोरहरुले यस्ता साइटहरु प्रयोग गर्दछन् तब उनीहरुसम्म पुगेर स्वास्थ्य सेवा तथा सहायताकाबारेमा प्रचार गर्ने अवसर स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुले पाउँछन् भन्ने उनको भनाइ छ ।
यो लेख साइवर साइकोलोजी, विहेभियर एण्ड सोशल नेटवर्किङ जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो ।